Shiinaha Sidee loo adeegsadaa calaamadaha dhijitaalka ah ee dhismaha qolyaha dhismaha? warshad iyo soosaarayaasha | SYTON
Bar Screen taagay
Portable Digital calaamado
Warshadaha PC warshadaha
Dukaan yar Screen Touch
Floor istaagid Advertising Player
Taabta Player ad Screen
Player ad Version Net
Cayaaraha Xayeysiinta ah ee Mount Mount
Taabta Player Screen ad Wall Mount
Net ad Version Wall Fardoolayda Player
Bannaanka Advertising Player
Floor istaag Player ad Bannaanka
Wall Mount ad dibada Player Gear Reductor
Gidaarka LCD Video
Shoe Player ad Polish
Cayaaraha Xayeysiinta Baska
Sidee loo adeegsadaa calaamadaha dhijitaalka ah ee dhismaha qolyaha dhismaha?
Sidee loo adeegsadaa calaamadaha dhijitaalka ah ee dhismaha xafiisyada shirkadda?
SYTON waxay rakibtay calaamado dijitaal ah oo loogu talagalay qolka shirkadda. Shaqooyinkeeda waxaa ka mid ah wararka rogista, cimilada, bogagga warbaahinta, liisaska dhacdooyinka iyo howlaha shirkadda
Maalin kasta, shirkado badan oo adduunka ka mid ah ayaa billaabaya inay adeegsadaan calaamadaha dhijitaalka ah si ay u siiyaan waayo-aragnimo u ololeyn raalli ahaaneed oo wanaagsan, oo la jeclaan karo oo faa'iido u leh shirkadda. Laga soo bilaabo shaashadaha soo-dhaweynta illaa buug-gacmeedka dijitaalka ah, calaamadaha dhijitaalka ah ee ka socda hoolka ayaa saameyn weyn ku yeelan kara shirkaddaada. Haddii aad sidoo kale rabto inaad u isticmaasho calaamadaha dhijitaalka ah isgaarsiinta gudaha.
Aynu eegno dhowr siyaabood oo loogu adeegsan karo astaamaha dijitaalka ah ee ka socda shirkadda dhexdeeda.
U adeegso astaamaha dijitaalka ah ee ka socda shirkaddaada si aad si hufan oo sax ah u tabiso taariikhda shirkaddaada, himilada, aragtida, jadwalka, daneeyayaasha, iyo guulaha ay gaareen macaamiisha mustaqbalka iyo shaqaalaha cusub. Qaabkan wadaagista sheekooyinka shirkadda waa mid casri ah, la mahadiyey oo hal-abuur leh. Fiidiyowyada gaagaaban ee shirkadda iyo sheekooyinka guusha macaamiisha sidoo kale waa waxyaabo waaweyn. Iyaga ayaa kuu sheegi kara sheekadaada isla markaasna adkeynaya sababta iyo sida shirkaddaadu uga duwan tahay.
Diiwaanka dijitaalka ah
U oggolow martidaada inay si fudud u helaan macluumaad muhiim ah oo raadinta macluumaadka ah. Adiga oo adeegsanaya buugga dijitaalka ah, waxaad ku dari kartaa khariidadaha raadinta-shaashadda, macluumaadka xiriirka, lambarrada suugaanta, iwm. Buugga dijitaalka ah waxaa lagu cusbooneysiin karaa waqtiga dhabta ah meel kasta oo aad joogto, waxaadna ku qori kartaa kireystayaasha dabaqa, lambarka suumanka ama qaabka xarfaha.
Liisaska dijitaalka dijitaalka ah ka sokow, waxaad sidoo kale shakhsiyeyn kartaa nuxurka shaashadda oo leh farriimo soo dhaweyn ah oo loogu talagalay martida gaarka ah iyo macaamiisha. Fariimahan ayaa horey loo sii qorsheyn karaa si otomaatig ah ayaa loo ciyaari karaa waxayna u dhacayaan taariikh iyo waqti cayiman.
Darbiga fiidiyowga ololaha
Marka martidu soo gasho ololeynta shirkaddaada, waxaa muhiim ah inaad abuurto aragti hore oo caafimaad qabta oo qumman. Tani waxay qeexaysaa niyadda booqdaha booqashada oo dhan. Habka ugu fiican ee tan wax ku ool ah ayaa ah in la isticmaalo calaamadaha dhijitaalka ah ee shirkadda qaab darbi fiidiyoow ah (2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, iwm.). Darbiga TV-ga wuxuu reebi doonaa aragti qoto dheer oo gaar ah. Tani waa hab fiican oo aad sumaddaada uga dhex muuqan karto!
Si aad ugu darto lama filaan dheeraad ah, waxaad ku soo dhaweyn kartaa martida farriimo soo dhaweyn ah oo shaqsi ah oo leh sawirro, qoraal, iyo macluumaad kale oo la xiriira martidaada. Waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa darbiga fiidiyowga inaad ku soo bandhigto dhammaan noocyada waxyaabaha xiisaha leh, sida macluumaadka badeecada cusub iyo xayeysiinta, dhacdooyinka waaweyn ee soo socda, wararka shirkadda ee hadda jira iyo quudinta warbaahinta bulshada. Waxay sidoo kale u oggolaaneysaa isdhexgalka macaamiisha ee shakhsi ahaaneed iyo wax ku ool ah, taas oo soo jiidan doonta martida iyo martida inta badan.
Marka la barbardhigo isticmaalka calaamadaha boodhadhka dhaqameed ama boorarka, saamaynta darbiga fiidyowga ayaa aad muhiim u ah. Si kastaba ha noqotee, u ololeynta shirkadaha waa bar-bilowga ugu weyn ee booqdayaasha oo dhan, ha ahaadeen martida cusub ama kuwa ku soo noqonaya guriga. Marka maxaad ugu adeegsan weyday calaamadaha dhijitaalka ah hoolka si aad ugu abuurto khibrad lama iloobaan ah oo soo jiidasho leh martidaada, martidaada iyo shaqaalahaaga, si aad uga faa'iideysato fursaddan?
Waqtiga boostada: Mar-20-2021
our raad, hoggaanka, innoation, waxyaabaha
Cinwaanka: dabaqa 2aad, 1aad Bldg., Senyang Hi-Tech Science Park, No.7 Rd.,
Xafiiska Gongming, Guangming Degmada Cusub, Shenzhen, Guangdong, Shiinaha
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2021: Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay. Products Featured - Tags Hot - Sitemap.xml - amp Mobile
Self Service Interactive Dukaan yar , Screen Touch Interactive Dukaan yar , Bannaanka Digital calaamado Double , Interactive Touch Screen Dukaan yar , Interactive Dukaan yar , Dukaan yar Screen Touch,
hi, sidee baan kaaga caawin karaa saxeexa digitla